२०७७ साउन -१०,शनिवार तपाइको आजको राशिफल ! – Khabar PatrikaNp
July 25, 2020 488
वि.सं.२०७७ साउन -१०,शनिवार, ई.सं.२०२० जुलाई – २५ , शक संवत् – १९४२,नेपाल संवत्-११४० गुँलाथ्व, प्रमादी, दक्षिणायन, वर्षा, श्रावण शुक्लपक्ष तिथि-पञ्चमी , १४:१० बजे उप्रान्त षष्ठी,नक्षत्र-उत्तरफाल्गुनी , १७:११ बजे उप्रान्त हस्त-योग,परिघ , ०९:१८ बजे उप्रान्त शिव,करण-वालव १४:१० बजेदेखि कौलव , २४:५८ बजे उप्रान्त वणिज,चन्द्रराशि-कन्या,आनन्दादि योग-उत्पात, सूर्योदय-५:२४, सूर्यास्त-१८:५५,दिनमान-३३ घडी ४८ पला, व्रत/पर्व-नाग पञ्चमी, ललितपुरको दानघाट एवं धापाखेल तथा काठमाडौंको नक्सालस्थित नागपोखरी र टौदहमा नाग-पूजन मेला, घर-घरमा नाग टाँस्ने सांस्कृतिक दिवस। कल्की जयन्ती।
अध्ययन तथा अध्यापनमा तपाई आफ्नै कारणले पछि पर्नुहुनेछ। खानपान तथा बाहिरि बाताबरणको ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या बढ्न सक्छ । माया प्रेममा सामान्य खटपट हुनेछ भने दाम्पत्य जीवनको गाठो फुस्कन सक्छ। सन्तान तथा छोराछोरि सँग पनि मनमुटाब बढ्नेछ। अदालत सँग सम्बन्धित काम गर्दा ध्यान दिनुहोला निर्णयहरु तपाईको पक्षमा नआउँन सक्छ । पुराना रोग बल्झने सम्भावना रहेकोछ।
तपाईको बौद्धिकतालाई सबैले सम्मान गर्नेछन् भने नया प्रबिधिको प्रयोग मार्फत खोजिमुलक काम गर्न सकिनेछ । शिक्षा क्षेत्र जस्तै स्कुल कलेज तथा यस्तै सस्थासँग सम्बन्धित कामहरुबाट मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने सकिनेछ। चिठ्ठा तथा उपहार प्राप्तीको गतिलो सम्भावना रहेकोछ भने माया प्रेममा निजिक भई भावना साटासाट गर्न सकिनेछ।
आमा तथा आफन्त सँग टाडिएर लामो दुरिको यात्रा गर्नु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । समयमा कामहरु सम्पन्न नहुदा मान तथा सम्मानमा ठे’स लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । माया प्रेम तथा प्रणय सम्बन्धमा चिसोपनाको बिकाश हुनेछ ध्यान दिनुहोला । खानपान तथा मौषमको ख्याल गर्र्नुहोला छाति सम्बन्धि समस्या नआउँला भन्न सकिन्न।
व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानि हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्ने तथा थोरै लगानि गर्दापनि प्रशस्त आम्दानि हुने समय रहेकोछ। सहयोगहिरु जुट्नाले रोकिएको काम सहजै सम्पादन हुनेछन् । दाजुभाई तथा अग्रजहरुको हरेक क्षेत्रमा साथ रहने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ। बिषेश समारोहमा सहभागि भई स्वादिष्ट भोजनका साथ रमाउन सकिनेछ।
सं’कट ब्याबस्थापनको लागि चालिएका कदम हरु निरर्थक हुनेछन् । रुपैया पैसा लेनदेन तथा सापटि लिने दिने काम नगर्नुहोला रुपैया पैसाकै कारण साथिभाई तथा आफन्त सँग मनमुटाब बढ्नेछ । नयाँ काम गर्नुभन्दा पुरानै कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ भने बैक तथा बित्तिय सस्थामा गरिएको लगानि भने फस्टाएर जानेछ । बाटो हिड्दा तथा सवारि साधन चलाउँदा ध्यान दिनुहोला कुनै पनि बेला अप्रिय घटना घट्न सक्छ।
Prevकोरोनाको आशंकामा अस्पतालले भर्ना नलिँदा एम्बुलेन्समै बिरामीको मृत्यु !
Nextवर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेर बिहीबारसम्म २२ जना बे’पत्ता
मलेसियाको पार्कमा अलपत्र सविना छोरासंगै सकुशल नेपाल फर्किइन्
यी हुन् धन प्राप्तीका ७ सरल उपाय…
बितेको २४ घण्टामा देशभर १५३९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित